မဂၤလာခုတင္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး(အပိုင္း၆) - ျမင့္ျမတ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗိုလ္ ဝတ္မႈံေ႐ႊရည္ Myanmar Movies
Cherry Win5 วันที่ผ่านมา
Mg Mg14 วันที่ผ่านมา
StevinPau Sing20 วันที่ผ่านมา
Pye Lin25 วันที่ผ่านมา
ba mar yoke shine nga porasint ga ma tet
Aung San27 วันที่ผ่านมา
nwe nwe28 วันที่ผ่านมา
May Shein28 วันที่ผ่านมา
sawlarshue phaung28 วันที่ผ่านมา
Soe Win28 วันที่ผ่านมา
Ayeyadanar Waing28 วันที่ผ่านมา
အပိုင်း7 တင်ပေးပါအုံး။ပြီးအောင်လေးတော့ကြည့်ချင်တယ် ။ပြီးမှ တခြားကားကို တင်ပေးလေ
Ju Ju28 วันที่ผ่านมา
Myo Myint28 วันที่ผ่านมา
Moo Moo28 วันที่ผ่านมา
အမလေး ဇာတ်သိမ်းမျှော်နေပါပြီးနော် 😂😂😂 ရယ်လိုက်ရတာ 😂😂😂 ကျေးဇူးပါ မဟာ
Ko Mkt29 วันที่ผ่านมา
Ko Myat29 วันที่ผ่านมา
တင်ရင် အပီးတင်လိုက်ပါတော့လားး ဆိတ် လီးကို ခွေးမျှော်သလို မျှော်နေရတယ်
Oo Lay Gyi29 วันที่ผ่านมา
​ေက်း​ေက်း မဟာ♥ ♥
မြိတ်သား မြိတ်29 วันที่ผ่านมา
တစ်ရက် ၂ ပိုင်းလောက်တင်ပါ အပိုင်းက တိုလွန်းတယ်
ko kayin29 วันที่ผ่านมา
Zinmin Aung29 วันที่ผ่านมา
Bonjour Myanmar29 วันที่ผ่านมา
Hahahaha hahahaha 😂😆😆😆😆😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
mgmg agag29 วันที่ผ่านมา
တပိုင္မီႏွစ္ 30 ေလာက္ေတာ့တင္သင့္တာေပါ့
May thoon29 วันที่ผ่านมา
Soe Min Tun29 วันที่ผ่านมา
You have to start by looking at the phone money
It's on TV from start to finish
Can't post first?
K.z. Phyu29 วันที่ผ่านมา
Tsaw Ra29 วันที่ผ่านมา
Nampu Sk29 วันที่ผ่านมา
Mg than Oo29 วันที่ผ่านมา
ဟုတ္တယ္ဗ် အစ အဆံုးဘဲ တင္ေစခ်င္တယ္ ၾကည့္ရတာလည္း အဆင္ေျပတယ္ေလ အခုက တစ္ေန႔တစ္ပိုင္းနဲ႔ ၾကည့္ေနရတာ အဆင္မေျပဘူးဗ်
Sanook Sanook29 วันที่ผ่านมา
ေသာက္ခပ္တဲ့ေနရာ အရမ္းမိုက္တယ္ 😁😁😁😁
Soe Zin Aung29 วันที่ผ่านมา
Ah Win29 วันที่ผ่านมา
koko win koko win29 วันที่ผ่านมา
Kimchi Tae29 วันที่ผ่านมา
waiting for part.7
Thi Dar29 วันที่ผ่านมา
jack ke29 วันที่ผ่านมา
paing paing29 วันที่ผ่านมา
ေမ်ာ္ွရတာေမာတယ္ပိုက္ဆံရွာတာနာလည္တယ့္ သည္ေလာက္အပိုင္းဆက္တိုးတာေတာ သိပ္မမိုက္ဘူ
Johnathan James29 วันที่ผ่านมา
ကြည့်တောင် မကြည့်ရသေးဘူး ဇာတ်သိမ်းပြီ အစ အဆုံး full movie တင်ပေးပါ
Mi Naung29 วันที่ผ่านมา
Lovely fish29 วันที่ผ่านมา
Htoo Khant29 วันที่ผ่านมา
Michelle Myat29 วันที่ผ่านมา
Mahar Thank You again and again for these Hilarious Movies!
Minn Soe29 วันที่ผ่านมา
ဒီကားႀကီးၿပီးရင္ ပုရိသရယ္ ေတာက္ခ်လိုက္မယ္ ၂ကားထဲက၁ကားတင္ေပးပါေနာ္please 🤟🏻
Than Naing lin29 วันที่ผ่านมา
Myint Myat Maung29 วันที่ผ่านมา
ancang luri29 วันที่ผ่านมา
Shwe Tharlay29 วันที่ผ่านมา
Anxbf Movmg29 วันที่ผ่านมา
Hlahla Mgmg29 วันที่ผ่านมา
Mahar ကလည့္အရမ္းစိတ္ပ်က္စရာႀကီးဘဲ စိတ္ကိုကုန္ေနတာ
အပိုင္း5အပိုင္း6လုပ္မေနနဲ႔ အစအဆံုးတင္ထားတာေတြကို မေတြ႔ၾကဘူးလား တင္ေနတာကလည့္ ပဲမ်ားေနေသးတယ္
MARKCUS TEE29 วันที่ผ่านมา
Thankful so funny movie 🎥 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥰🥰🥰🥰🥰🥰
Than Ko29 วันที่ผ่านมา
The Mobile29 วันที่ผ่านมา
S My29 วันที่ผ่านมา
Wer Tun29 วันที่ผ่านมา
Mma6327 Mma29 วันที่ผ่านมา
Hsar Kler Htoo29 วันที่ผ่านมา
ko myint myat so funny can't wait to watch part7thank you mahar
ติน ทวย29 วันที่ผ่านมา
ကက္ဆီနဲ႔တာနဲ႔ နဲ႔ေတာ့မ်ားသြာပီဗ်ာမဂၤလာ ေဆာန္တာေတာင္ ကက္ဆီနဲ႔တာေတာ့မ်ားပီ
Thet Thet29 วันที่ผ่านมา
ye ye29 วันที่ผ่านมา
Lin Htet Mon.29 วันที่ผ่านมา
THEL LAY29 วันที่ผ่านมา
Fly Boyz Channel29 วันที่ผ่านมา
Hsu htet Lwin29 วันที่ผ่านมา
ลูก ค้า29 วันที่ผ่านมา
NWENWE WIN29 วันที่ผ่านมา
Sie Soe29 วันที่ผ่านมา
ซัน ซัน29 วันที่ผ่านมา
se se soe se se soe love29 วันที่ผ่านมา
Wai Yan29 วันที่ผ่านมา
မြန်မာဇာတ်ကား - သုံးရောင်ခြယ် - ခန့်စည်သူ ၊ နေမျိုးအောင် ၊ မင်းမော်ကွန်း ၊ အိချောပို ၊ ရွှေသမီးDrama
Myanmar movies-10 Eain Goung-Myint Myat,Yu Thandar Tin,Yadanar Bo
#မငြိမ်းသောမီး(ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး) ဒွေး မို့မို့မြင့်အောင် နန္ဒာလှိုင် ဆုပန်ထွာ
အာဘွား✌️Kiss (ဟာသကားကြီးစဆုံး) နေတိုး သက်မွန်မြင့် စိုးမြတ်နန္ဒာ ခင်လှိုင် ဒိန်းဒေါင်
Lawe Lawe Lay (Part 1)
မြန်မာဇာတ်ကား - ဟန်းနီးမွန်း - ကျော်ရဲအောင် မြင့်မြတ် ကျော်ကျော်ဗိုလ် အိချောပို ရွှေမှုံရတီ - Funny
อภิมหาตำนานแห่งหนังกาว l สปอยหนัง l - กังฟู กังเฟอะ กังฟะ
👺จากชายธรรมดาสู่สุดยอดจอมมารโคตรเทพ👺 jujutsu kaisen มหาเวทย์ผนึกมาร จบในคลิปเดียว
โสภิตาและเจตน์ ถูกขังห้องเย็น l HighLight l จากศัตรูสู่หัวใจ EP.12 l 22 พ.ย. 63
ข้านี่แหละ !! บุตรแห่งเทพเจ้าหลงหยวน ตอนที่ 1 - 140 #มังงะพระเอกเทพ/มังงะใหม่